Raysal Wasaare Khayre oo daah furay Imtixaanka Shahaadiga ee Muqdisho – Radio Daljir
Raysal Wasaare Khayre oo daah furay Imtixaanka Shahaadiga ee Muqdisho
Maajo 19, 2018 10:38 b 0
Ra”iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daah furay Imtixaanaadka Shahaadiga ah , oo ay maanta u fariisteen 27,600 oo arday.
Schoolka 15-ka May oo uu ka dhacayey imtixaanaadkaasi oo si weyn loo adkeeyey amniga ayaa waxaa gaaray Ra’iisul wasaaraha dalka oo ay wehliyaan guddoomiyaha gobolka Benaadir iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka hadlay daah furka Imtixaanaadkaasi ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee horumarka daka, in wax la bartana ay astaan u tahay dib u dhiska dalka.
“Waa Iftiin qaranimo Soomaaliyeed ay ka muuqato, Waa Horumar uu wadankeenu ku tilaabsanayo, waxeyna ahaan doontaa howlaha saldhiga u ah xukuumaddu iney ka shaqeyso”ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ra”iisul wasaaraha Soomaaliya.
Golaha Xukuumadda Puntland oo Kulan Degdeg ah ka yeeshay xaaladda Tukaraq